YEYINTNGE(CANADA): Sunday, April 01
ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ စာရင်းby NLD
by News and Information Department of NLD
‎3 more to confirm soon.....
NLD candidate in Kalaw; Dr. Daw Than Ngwe said that she wins more than 75% of votes for by-election.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/01/2012 1 အကြံပြုခြင်း
မိတ္ထီလာ မဲအရေအတွက် NLD- 62784 , USDP- 49072
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ်၊ NLD ကိုယ်စားလှယ် မဖြူဖြူသင်းက မဲပေါင်း ၅၅၁၀၉ ဖြင့်အနိုင်ရ
ပုသိမ်မြို့နယ်တွင်NLD ပါတီက (၁၂၆) ရုံတွင် အနိုင်ရခဲ့ပြီး USDA ပါတီက တပ်နယ်(၁၅)နေရာတွင် အနိုင်ရ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပုလဲမြို့နယ်အမျုိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLDကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဆန်းလှိုင်က ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဌေးနိုင်ကို ဆန္ဒမဲ လေးသောင်းကျော်ဖြင့် အနိုင်ရရှိ
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် မဲရုံစုစုပေါင်း ၁၉ ၉ရုံအနက် ၁၅၉ ရုံ ရေတွက်ပြီးရာတွင် NLD က ၆၁.၆၂၁ %ရနေပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ၃၈.၃၇၉ % ရှိ
ပုသိမ်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် မဲရုံပေါင်း ၂၀၂ရုံရှိသည့်အနက် ၉၅ ရုံတွင် မဲရေတွက်ပြီးစီးပြီုဖစ်ရာ NLD က ၇၇ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အသာစီးရနေ
ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၃)တွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက မဲအသာစီးဖြင့် ဦးဆောင်နေပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဒုတိယနေရာမှ လိုက်လျက်ရှိ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD ပါတီမှ ဦးကျော်သီဟက ၅၄၃၁၇ မဲရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဦးခင်မောင်ဝင်းက ၃၄၁၅၁ မဲသာရရှိ
မော်လမြိုင်တွင် NLD မှ ၄၁ နေရာတွင် ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ် က ၃၄ နေရာ အနိုင်ရရှိ
ထားပြီး ၄ နေရတွင် ရှုံးနိမ့်၍ ၃ နေရာ၏ရလာဒ်ကို မသိရှိရသေး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်တွင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူစုစုပေါင်း နှစ်သိန်းခြောက်သောင်းကျော် ရှိသည့် အနက်မဲပေးသူ နှစ်သိန်းခန့်၏ဆန္ဒမဲပေးမှုဖြင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် အနိုင်ရရှိနေ
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်မဲရုံပေါင်း ၁၁၇ ရှိပြီး၊ NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့်က မဲပေါင်း ၆၅၁၅၄ (ခြောက်သောင်းငါးထောင် တရာ့ငါးဆယ့်လေး)မဲ၊USDP ပါတီ ၁၅၂၅၁မဲ၊ NDF ပါတီက ၂၁၉၃မဲ၊ NNDP ပါတီ့ ၁၅၉၄မဲ၊ တသီးပုဂ္ဂုလိက ဦးခင်လှိုင်က ၂၃၃၀ မဲ၊ မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂယက်ပါတီက ဒေါ်ဟေမာဋ္ဌေးက ၁၂၅၇ မဲတို့ အသီးသီးရရှိကာ၊ NLDပါတီ အနိုင်ရရှိ
ကျွန်းစုမြို့နယ်တွင် မဲရုံ(၁၄၂)ရုံရှိရာ (၈၂) ရုံမှ မဲများရေတွက်ပြီးချိန်၌ NLD က မဲရုံ (၇၅)ရုံတွင် အနိုင်ရထားပြီး USDP က မဲရုံ(၇)၌သာ အနိုင်ရရှိ
လားရှိုး၊ တန့်ယန်း၊ မိုင်းရယ်၊သိန္နီ၊ ကွမ်းလုံ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၃မှ သိန္နီနယ်မှာ ကျားဖြူပါတီက ဒုတိယလိုက်နေသည့် NLD ပါတီကို မဲ ၆၀၀၀ အသာရ ၊မိုင်းယန်မဲဆန္ဒနယ်မှာ ကျားဖြူပါတီကပဲ ဒုတိယလိုက်နေသည့် NLDပါတီကို မဲ ၆၀၀၀ အသာရနေ
လားရှိူးမှာ ဒီချုပ်ကမဲပေါင်း ၁၅၈၄၂၊ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၆၆၆မဲ။
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD ပါတီက ၃၆၁၂၆ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီက ၁၀၃၆၅ မဲ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ မဲဆန္ဒနယ်တွင် မဲပေးနိုင်သူ ၈၁၅၀၀ ဦးအနက် ၄၈၀၇၈ ဦးက မဲလာပေး
မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွှာစုစုပေါင်း ၄၁ခုတွင် ၃၇ခု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်က ပြိုင်ဘက် ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများကို အနိုင်ရရှိ
NLD ပါတီမှ ၆၅၀၄၈မဲ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၁၅၇၈၉မဲရရှိ
ဦးမင်းသူကနေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိ မဲဆန္ဒနယ်ရှိ မဲရုံပေါင်း ၄၉ ရုံ၌ NLD ပါတီက ၃၄ရုံအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဆန္ဒမဲ ခုနှစ်ထောင် နီးပါးဖြင့် အနိုင်ရရှိ
ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဝင်းဌေးအား ဆန္ဒမဲ ငါးထောင်ကျော်ဖြင့်အနိုင်ရရှိ
ပုဗ္ဗသီရိ မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဦး ဖြိုးဇေယျာသော်က ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးသာဌေးအား ဆန္ဒမဲ နှစ်ထောင်ကျော်ဖြင့် အနိုင်ရရှိ
ဒက္ခိဏသီရိ မဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးနိုင်ငံလင်းက ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အငြိမ်းစား ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးမောင်ရှိန်အား ဆန္ဒမဲ သုံးထောင့်နှစ်ရာအကွာဖြင့် အနိုင်ရရှိ
တနသာင်္ရီတိုင်းဒေသကြီး လောင်းလုံး မဲဆန္ဒနယ်တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်စိုးက ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိမ်းမောင်အား ဆန္ဒမဲ နှစ်သောင်းကျော်ဖြင့်အနိုင်ရရှိ
ကော့မှူးမြို့နယ်မဲရုံ ၁၃၀ ရှိသည့်အနက် ၁၂၈ ရုံမှာ NLD အနိုင်ရရှိ။ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်နှင့် သမင်ခြံကျေးရွာနှစ်နေရာတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးကအနိုင်ရ
ပုလဲမြို့နယ်တွင် မဲရုံ ၁၁၀ ရှိရာ ၉၂ ရုံတွင် မဲရလဒ်အရ NLD ပါတီက ၈၁ နေရာတွင် အနိုင်ရရှိ
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် မဲရုံပေါင်း ၃၈၃ ရုံရှိသည့်အနက် ၂၅၉ နေရာကို NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိနေပြီး၊ ကျန် ၂၄ ရုံတွင်သာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက အနိုင်ရရှိ
မကွေးမြို့နယ်တွင် မဲရုံပေါင်း ၂၆၅ရုံရှိသည့်အနက် မကွေးမြို့နှင့် ကျေးရွာအချို့မှ မဲရုံပေါင်း ၄၀ကိုရေတွက်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ရာ NLDက၂၃၁၆၆မဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက၄၄၇၉မဲရရှိ
၁။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ကော့မှူး)
၂။ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် (ပုလဲ)
၃။ ဦးအောင်စိုး (လောင်းလုံ)
၄။ ဦးမြင့်သိန်း (မကွေး)
၅။ ဦးအုံးကြိုင် (မန္တလေး)
၆။ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း (မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်)
၇။ ဒေါက်တာမျိုးအောင် (ဒဂုံဆိပ်ကမ်း)
၈။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း (လှည်းကူး)
၉။ ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့် (မရမ်းကုန်း)
၁၀။ ဦးပေါခင် (နွားထိုးကြီး)
၁၁။ ဦးပိုက် (ပခုက္ကူ)
၁၂။ ဒေါက်တာမြင့်နိုင် (စစ်ကိုင်း)
၁၃။ ဦးသိမ်းဆွေ (ဖျာပုံ)
၁၄။ ဦးကျော်သီဟ (ပြင်ဦးလွင်)
၁၅။ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် (ကျောက်ပန်းတောင်း)
၁၆။ ဦးမန်းဂျော်နီ (မြောင်းမြ)
၁၇။ ဦးစိုင်းမြင့်မောင် (လားရှိုး)
၁၈။ ဦးခင်မောင်သိန်း (စစ်ကိုင်း)
၁၉။ ဒေါ်စန္ဒာမင်း (နေပြည်တော်)
၂၀။ ဦးဖြိုးဇေယျာသော် (နေပြည်တော်)
၂၁။ ဒေါ်စုစုလွင် (သုံးခွ)
၂၂။ ဦးနိုင်ငံလင်း (နေပြည်တော်)
၂၃။ ဒေါ်ခင်ဋ္ဌေးကြွယ် (မော်လမြိုင်)
၂၄။ ဦးအောင်စိုးမြင့် (တောင်ငူ)
၂၅။ ဦးဝင်းထိန် (မိတ္ထီလာ)
၂၆။ ဦးမင်းသူ (နေပြည်တော်)
၂၇။ ဦးမြင့်ဦး (သနပ်ပင်)
၂၈။ ဒေါက်တာသန်းငွေ (ကလော)
၂၉။ ဒေါ်ခင်သန္တာ (တံတားဦး)
၃၀။ ဦးစိန်ဝင်းဟန် (မအူပင်)
၃၁။ ဦးကျော်မြင့် (မြန်အောင်)
၃၂။ ဒေါ်တင်တင်ရီ (မြိတ်)
၃၃။ ဦးဝင်းမြင့် (ပုသိမ်)
၃၄။ ဒေါ်ခင်မွှေးလွှင် (မင်းကင်း)
၃၅။ ဦးမင်းဦး (ထန်းတစ်ပင်)
၃၆။ ဦးကျော်မင်း (လက်ပံတန်း)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/01/20120အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည် ပန်ကြား​ချက် ထုတ်ပြန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးရှိ မဲရုံများသို့ လှည့်လည် ကြည့်ရှု
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကော့မှူးမြို့နယ် မဲဆန်ဒနယ်မှ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်လျှက်ရှိသည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ကော့မှူး မြို့နယ် အတွင်းရှိ မဲရုံများသို့ လိုက်လံကြည့်ရှုနေစဉ်
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ ၁ဝ မိနစ်ခန့်က နေပြည်တော် ဇမ်ဗူသီရိ မဲဆန်ဒနယ် မဲရုံအမှတ် (၁/၁) အထက (၅) မဲရုံ၌ ဆန်ဒမဲ လာရောက်ပေးစဉ်
ကျောက်ပန်းတောင်းမဲဆန္ဒနယ်ရှိ မဲရုံ(၃၄၆)အနက် ကျေးရွာအုပ်စုများမှ မဲရုံ (၁၅၅)နှင့် မြို့ပေါ် မဲရုံ(၁၂)~၇ုံတွင် NLD က အနိုင်ရထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် မုန်းနားစုတာစည် တွင် ၄၇၃၊ ခင်တဲတွင် ၃၅၃၊ သရက်တောတွင် ၇၈၃၊ ရွှေဘိုရွာမတွင် ၆၄၆၊ အင်ဒေါင်းတွင် ၃၇၁၊ ကျောင်းတော်ရာတွင် ၈၂၉၊ တောင်အင်းတွင် ၄၅၇၊ ပေတောတွင် ၅၄၄၊ သမုန်းကုန်းတွင် ၂၂၅၊ ထနောင်းကုန်းတွင် ၅၃၂၊ မအူလေးပင်တွင် ၁၈၈၊ ရေပုတ်ကလေးတွင် ၅၃၇၊ မုံတော်ကြီးတွင် ၂၅၅၊ အနောက်လေးအိမ်တွင် ၂၈၁ မဲဖြင့် NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
လတ်တလော သတင်းများအရ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်တွင် NLD ပါတီက ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြင့် အနိုင်ရရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
စစ်ကိုင်းမြို့နယ်အတွင်း မဲရုံ (၁၁၉) ရုံ ရှိရာ မဲရုံ (၈၄)ရုံ ရေတွက်ပြီးချိန်တွင် NLD ပါတီမှ ဦးခင်မောင်သိန်းက USDP ပါတီမှ ဦးစိုးနိုင်အား မဲရုံ(၈၀) တွင် အနိုင်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မဲပေးခွင့်ရှိသူ - 1093 ဦး
ဆန္ဒမဲထည့်သူ- 749 ဦး
ပျက်ကွက်သူ 344 ဦး ရှိ
1။အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် (ဦးစိုင်းမြင့်မောင်) - 547 မဲ
2။ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(ဦးစိုင်းစံမင်း)- 31 မဲ
3။ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ဒေါက်တာ နန်းကိန်ဖောင်းတစ်) -126 မဲ
4။ကိုးကန့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ(ဦးလော်ဆင်ကွမ်း) - 24 မဲ
5။လားဟူ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ(ဦးယောသပ်) -3မဲ
ပယ်မဲ - 18 မဲ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရ
မဲပေးခွင့်ရှိသူ - 1409 ဦး
ဆန္ဒမဲထည့်သူ- 859 ဦး
ပျက်ကွက်သူ - 550 ဦး ရှိ
1။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် (ဦးစိုင်းမြင့်မောင်) - 572 မဲ
2။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(ဦးစိုင်းစံမင်း) - 27 မဲ
3။ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ဒေါက်တာ နန်းကိန်ဖောင်းတစ်) - 142 မဲ
4။ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ(ဦးလော်ဆင်ကွမ်း) - 65 မဲ
5။ လားဟူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဦးယောသပ်) - 15 မဲ
ပယ်မဲ - 38 မဲ ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရ
နေပြည်တော် ဇမ္ပူသီရိ မဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD ပါတီ ဆန္ဒမဲ ၅၀၀၀ ကျော်ဖြင့် အနိုင်ရရှိ
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၁ (7: 19 PM )
ပြန်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီအား ကိုယ်စားပြု၍ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် အနိုင်ရရှိသော နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိ မဲဆန္ဒနယ်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဝင်းဌေးအား ဆန္ဒမဲ ၅၀၀၀ ကျော်ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းအဆိုပါနေရာ၌ သွားရောက် သတင်းရယူနေသူ The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
အလားတူ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏ သီရိမဲဆန္ဒနယ်တွင်လည်း NLD မှ ဦးနိုင်ငံလင်းက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဒုတိယ အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးမောင်ရှိန်အား မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
Like · · Share · 2081472 · 15 minutes ago ·
မရမ်းကုန် ၁ ရပ်ကွက်တွင် ဆန္ဒမဲ သုံးထောင်ကျော် အသာဖြင့် NLD အနိုင်ရရှိ
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁ (7: 34 )
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်မြို့ နယ်ရှိ ဘုရင့်နောင် ပွဲရုံတန်း တည်ရှိရာ အမှတ် ( ၁ ) ရပ်ကွက်တွင် NLD ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်မေဝင်းမြင့်က ပြိုင်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ဆန္ဒမဲ သုံးထောင်ကျော်ဖြင့် အနိုင်ရရှိကြောင်း အဆိုပါ မဲရုံ၌ သတင်းရယူနေသူ The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ရေတွက်ပြီးစီးသော ဆန္ဒမဲ ရလဒ်များအရ NLD ပါတီ ဒေါ်မေဝင်းမြင့်က ၃၅၂၇ မဲ၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဦးရဲထွဋ်က ၃၆၄မဲ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဇောတိက ဦးခင်လှိုင်က ၅၁မဲ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ဒေါ်ခင်ဖြူဖြူငြိမ်းက ၄၄မဲ၊ အဆိုတော် ရသ ( ခ ) ဦးရဲမင်းသိန်းက ၂၁မဲ ၊ ပယ်မဲ ၁၃၄ မဲ အသီးသီး ရရှိခဲ့ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က ဆက်လက် သတင်းပေးပို့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မမှန်မကန် လုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ထင်ရှားတဲ့ အတိုက်အခံတွေနဲ့ မိမိတို့ စကားပြောဖို့ရှိကြောင်း သြစတြေလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Bob Carr က ဒီနေ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
မဲမမှန်မကန်မှုတွေ မပြောပလောက်တဲ့ အရေအတွက်သာ ရှိလိမ့်မယ်လို့ မိမိ မျှော်လင့်ပါကြောင်းလည်း သြစတြေလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိရေးဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အတွက် အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိမိတို့အနေနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို သေသေချာချာ လေ့လာ စောင့်ကြည့်နေကြောင်း၊ တကယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အပါအဝင် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကရော၊ လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေကပါ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှု ရှိတယ်လို့ အသိအမှတ် ပြုတယ်ဆိုရင် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို လျှော့ချပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သြစတြေလျ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး က ပြောပါတယ်။
Like · · Share · 2212 · 22 minutes ago ·
ဒီကနေ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အပါအဝင် ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ အနုပညာရှင်တွေလည်း မဲဆန္ဒပေးခဲ့ကြပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်က မဲရုံကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက် မဲထည့်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အလားတူ ရန်ကုန်တိုင်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာ နေထိုင်နေတဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးလည်း မဲပေးခဲ့ပါတယ်။ ဦးခွန်ထွန်းဦး မဲထည့်ရာမှာ ပါတီအမှတ်တံဆိပ် အမှတ်မှားပြီး ခမောက်ပုံကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လို့ ထင်မှတ်ပြီး မဲပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ နောက်မှ မဲလက်မှတ် ပြန်လဲပြီး NLD ကို မဲပေးခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်သူကလည်း ဒီကနေ့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာ မဲပေးခဲ့တယ်လို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။
အလားတူ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ကလည်း “အများကြိုက်ပါတီကိုပဲ သူ မဲထည့်ခဲ့တယ်” လို့ သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
1) Kaumhu - Daw Aung San Su Kyi
3) Magway - U Myint Thein
8) Kyoon Su –
10) Sagine - U Khin Maung Soe
As incoming results, NLD won in these constituencies; Bago Division, Kawa, Mandalay Division, Kaukpandaung, Yangon Division, HLegu, Mayankone. List are as below;
အနိုင်ရရှိသွားသော ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်များ ကို ကြေညာ (10 photos)
ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေဂုံတိုင် မြို့နယ် မှာ ရှိတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးချုပ် မှ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသွားသော အဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ် နာမည်များကို ကြေညာနေစဉ်
နေပြည်တော်ခရိုင် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမင်းသူဟာ ဒီနေ့ နေ့လည်အထိ မဲအပြတ်အသတ် နိုင်နေသော်လည်း မဲရုံပိတ်ခါနီးအချိန်တွင် ဘယ်ကမှန်း မသိသည့် မဲများ ရောက်ရှိလာသည့်အတွက် ယခုအချိန်တွင် မဲများကို ပြန်လည် စစ်ဆေးနေတာ ဖြစ်ပါသည်။ (၅း၄၅ pm)
- ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (မဲရုံအားလုံးနိုင်)
Burma VJ Media Network sharedalink.
ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူမြို့ ရပ်ကွက် (၂) မဲရုံ (၁)မှာ ဒေသခံတွေ မဲလာထည့်ပေမယ့် မဲပေးခွင့်မရတာကြောင့် မကျေမနပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အန်အယ်လ်ဒီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်စိုးမြင့်က ဒေသခံတွေကို မဲပေးခွင့်ရစေလိုကြောင်း ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ကော့မှူးမြို့  မဲဆန္ဒနယ် တွင် NLD ပါတီမှ ရရှိခဲ့သော မဲအရေအတွက်များ
ကော့မှူး၊ ဧပြီ ၁ (4: 43 PM )
ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ် တွင် ဆန္ဒမဲပေးမှုများ ပြီးစီးခဲ့ရာ မဲရေတွက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အမျိုးသာဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် မှ ဘုတ်တင် ကျေးရွာ မဲရုံ ( ၁ ) တွင် ၃၅၈ မဲ ( ၉၁ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်း) ၊ မဲရုံ ( ၂ ) တွင် ၂၈၁ မဲ ( ၈၁ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင်နှုန်း ) ၊ ကရင်စုကျေးရွာ မဲရုံတွင် ၂၃၈ မဲ ( ၈၇ ဒသမ ၈၂ ရာခိုင်နှုန်း )၊ ပျားမွတ်ကျေးရွာတွင် ၂၀၃မဲ ၊ ရေတာရှည်တွင် ၃၆၁မဲ ( ၉၁ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း )၊ မြတ်ဆံနီ ကျေးရွာ တွင် ၁၅၁ မဲ ( ၆၈ ရာခိုင်နှုန်း ) ရရှိခဲ့ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က တိုက်ရိုက်သတင်းပေးပို့သည်။
NLD ပါတီ မော်လမြိုင် မဲရုံ အမှတ် ၃ တွင် အနိုင်ရရှိ
မော်လမြိုင်၊ ဧပြီ ၁ (5: 20 PM )
မဟာအောင်မြေ မဲရုံ ၁၀ ရုံ၌ NLD ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း အနိုင်ရရှိ
မန္တလေး၊ ဧပြီ ၁ (5: 30 PM )
ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနိုင်ရရှိ
ကော့မှူး၊ ဧပြီ ၁ (5: 08 )
ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသော ရှစ်သောင်း ခုနှစ်ထောင်ကျော် ရှိသော ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ်တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနိုင်ရရှိကြောင်း အဆိုပါ မဲဆန္ဒနယ်သို့ သွားရောက် သတင်းရယူနေသူ The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ရေတွက် ပြီးစီးသော မဲရလဒ်များအရ ဆန္ဒမဲ ထက်ဝက်ကျော်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရရှိခဲ့သဖြင့် NLD ပါတီ ဝင်များမှာ ကော့မှူးမြို့ ၌ လှည့်လည် အောင်ပွဲခံ၍ ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပြန်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က ထပ်မံ သတင်းပေးပို့သည်။
မဲရုံပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ရှိသော ကော့မှူး မဲဆန္ဒနယ်တွင် မဲရုံပေါင်း ၇၀ ခန့်အား ရေတွက် ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ သိရှိရသည်။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းတွင် ရေတွက်ပြီးမဲရုံများ၌ NLD မှ အနိုင်ရရှိဟုဆို
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်တွင် စုစုပေါင်း မဲရုံ ၁၈ ရုံရှိရာ မဲရေတွက်ပြီးစီးသွားသော မဲရုံ ၁၀ ရုံတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာမျိုးအောင် က အနိုင်ရရှိထားကြောင်း NLD မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များ၏ အတည်ပြုချက်အရ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် NLD ရုံးအဖွဲ့ မှူး ဦးထွန်းဝက The Voice ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
ရန်ကုန် ဧပြီ ၁ (6:10)
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် NLDမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာမျိုးအောင် ပြတ်သားသော ရလဒ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်၍ ယုဇန ဥယျာဉ်မြို့တော်တွင် NLD ကို ထောက်ခံသူများ အောင်ပွဲ ခံနေကြ သည်ဟု မြို့နယ် အောင်နိုင်ရေးကော်မတီဝင်တစ်ဦးက The Voice သို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
ယခုသတင်းရေးသားချိန် ၆ နာရီ ၁၁ မိနစ်အထိ ရပ်ကွက် နှစ်ခုနှင့် ရွာတစ်ရွာ တို့မှ ရလဒ်ကို မရသေးသော် လည်း ကျန် ကျေးရွာနှင့် ရပ်ကွက် ၁၃ ခုတွင် NLD က အနိုင်ရရှိထားပြီး မဲဆန္ဒနယ် တစ်ခုလုံးရှိ စုစုပေါင်း မဲ၏ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ရထားပြီဖြစ်ရာ သေချာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဒဂုံဆိပ်ကမ်း NLD ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးထွန်းဝက ဆိုသည်။
တောင်ငူအမှတ်(၂) ရပ်ကွက် မဲပေးရန် ကျန်ရှိသူများအား မဲလက်မှတ်များ ပြန်ထုတ်ပေးနေ
တောင်ငူ၊ ဧပြီ ၁ ( 4:25 PM )
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးရန်
စိတ်အား ထက်သန်လျှက်ရှိသောမြို့ တစ်ခုဖြစ်သည့်
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင် တောင်ငူမြို့ ရှိ အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်
ဒေသခံများအား ၎င်းတို့ ဆန္ဒမဲပေးသည့် မဲရုံ ( ၃ ) တာဝန်ရှိသူများက
မဲပေးခွင့် လက်မှတ်များ ပြန်လည် ထုတ်ပေးနေကြောင်း အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်
ဒေသခံများနှင့် ဒေသခံ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးထံက သိရသည်။
“မဲစာရင်းကျန်လို့ ပြန်ထုတ်ပေးနေတယ် ကြားတယ်၊ အခု ၃ နာရီ
၀န်းကျင် မှာပဲ''ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
ဦးအောင်စိုးမြင့်က The Voice Weekly ၏ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက် ကို
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသော ဧပြီတစ်ရက်နေ့ စာရင်းတွင်
ယင်းရပ်ကွက်၏ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၇၅၆၂ ဦး ရှိသော်လည်း မဲရုံ သုံးရုံ ၏စာရင်းအရ
၇၁၀၃ဦးသာ မဲပေးခွင့် ရကြောင်းအမှတ် ၂ ရပ်ကွက် မဲရုံ ၃ စာရင်း၏ ထုတ်ပြန်ချက် စာရင်းများ အရ သိရသည်။
“မဲမထည့်ရဘဲ ပြန်သွားတဲ့ သူတွေ အများကြီးပဲ၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာ
တစ်အိမ်လုံး ကျန်တာတွေ မိသားစုထဲမှာ တစ်ချို့  ကျန်ခဲ့ တာတွေ ရှိတယ် " ဟု အသက်
၆၀ကျော် အရွယ် ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့် ရသူ ဒေါ်လှဝေသန်းက The Voice Weekly သို့ အသိပေး ပြောကြားသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမှတ် ၂ ရပ်ကွက်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့မြို့ နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မှလာရောက်ပြီး မြို့ နယ် ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ၂ ရပ်ကွက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပေးရန် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အားပြောကြားခဲ့ကြောင်း မဲပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သန့်ရှင်းမျှတ စေရန် စောင့်ကြပ် လိုက်လံကူညီပေးသူ ရပ်မိရပ်ဖ တစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
NLD ပါတီ မော်လမြိုင် ပန်းပဲတန်းရပ် မဲရုံ အမှတ် ၁ တွင် အနိုင်ရရှိ
မော်လမြိုင်၊ ဧပြီ ၁ (5: 45 PM )
မွန်ပြည်နယ်ရှိ တစ်ခုတည်းသော မဲဆန္ဒနယ် ဖြစ်သည့် မော်လမြိုင်မြို့ ၊ ပန်းပဲတန်း ရပ် မဲရုံ အမှတ် ၁ တွင် မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၁၃၄၀ ဦး မဲလာပေးသူ ၉၃၃ ဦး၊ ကြိုတင်မဲ ၆ဦး၊ပယ်မဲ ၄ မဲရှိပြီး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှ ၈၀၁ မဲ ၊ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ မှ ၉၃မဲ၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီက ၂၈ မဲ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီက ၇ မဲ အသီးသီးရရှိခဲ့ကြောင်း သွားရောက် သတင်းသွားရောက်ယူနေသူ The Voice Weekly သတင်းထောက်က တိုက်ရိုက် သတင်းပေးပို့သည်။
မိတ္ထီလာမဲဆန္ဒနယ်မဲရုံ လေးရုံတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ မဲအပြတ်အသတ်အနိုင်ရ
ထို့ကြောင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ၁၃၁၁ မဲ၊ NLD ပါတီက ၂၀၄ မဲ ၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်အေးက ၄၃ မဲ၊ ဦးဝင်းဇော်က ၁၄ မဲ အသီးသီးရရှိကြရာ အဆိုပါ မဲရုံလေးရုံတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မဲရုံအတွင်း ၀င်ရောက်ခွင့် တားဆီးခံရ
ရန်ကုန်၊ဧပြီ ၁ (1း 45 pm)
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
လောင်းများအား မဲရုံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်မှုကို တားဆီးခံခဲ့ရသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်အမှတ် (၈)ရပ်ကွက် လွန်ခဲ့သောမိနစ်အပိုင်းအတွင်း
က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု မရမ်းကုန်းမြို့ နယ် ပါတီဝင်များက ပြောကြားသည်။
မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်အမှတ် (၈) ရပ်ကွက် အ.မ.က (၂၇) တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော မဲရုံအမှတ် (၈)နှင့် (၉)အား အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု ကိုယ်စားပြု၍ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ဒေါ်ခင်ဖြူဖြူငြိမ်းက ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီမိနစ် ၂၀ ခန် တွင် အဆိုပါမဲရုံများ အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခွင့် တားဆီးခံခဲ့ရခြင်း ကြောင်း၎င်းကပြောကြားသည်။
အလားတူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီပါတီသစ် ကိုယ်စားပြု ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သော ဟစ်ဟော့အဆိုတော် ရသ မှာလည်း မရမ်းကုန်းမြို့ နယ် (၇) ရပ်ကွက်(၁)၊(၂)၊ မဲရုံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခွင့် မရရှိခဲ့ကြောင်း အဆိုတော်ရသက The Voice Weekly သို့ပြောကြားသည်။
မဲရုံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခွင့် မပြုခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အဆိုပါမဲရုံမှူးကို အဆိုတော် ရသက မေးမြန်းရာ သက်ဆိုင်ရာမဲရုံမှူးက မြို့နယ်ကော်မရှင်သို့သာ မေးမြန်းရန် ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း အဆိုတော်ရသက ပြောကြားသည်။
အစိုးရ ဝန်ထမ်း အများစု အခြေပြုနေထိုင်ရာ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိ မဲဆန
္ဒနယ်တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ပြည်သူလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
လောင်း ဦးနိုင်နိုင်လင်းက ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အငြိမ်းစား ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးမောင်ရှိန်အား ဆန္ဒမဲ
၇၀၀၀ ကျော်ဖြင့် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း The Voice Weekly
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကန်တော်လေးတောင်ရပ်ကွက် NLD ၇၅၄မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၉ မဲ၊
ရေတွင်းကုန်းမဲရုံ အမှတ် ၂ တွင် NLD ၁၄၆၀မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂မဲ၊
မဲရုံအမှတ် ၄ တွင် NLD ၄၆၁မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၇မဲ၊
မဲရုံအမှတ် ၅ တွင် NLD ၃၆၂မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၂မဲ၊
မဲရုံအမှတ် ၇ တွင် NLD ၄၀၃မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၃မဲ၊
လားရှိုးမြို့တွင် ယခုနောက်ဆုံး ရရှိလာသော မဲရလဒ်များအရ NLDက မဲပေါင်း ၁၅၈၄၂၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ၆၆၆၆မဲ၊ နှင့် ကျားဖြူပါတီက ၂၈၀၀ မဲ ရှိနေကြောင်း လားရှိုးမြို့ရော မြစ်မခ သတင်းထောက် အောင်မြင့်မြတ်ချိုက သတင်းပေးပို့သည်။
လားရှိုးမြို့တွင်လည်း NLD ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းမြင့်မောင်မှာ မဲအရေအတွက်ကောင်းပြီး နိုင်ချေရှိကြောင်း၊ တပ်မဲမှားတွင် အန်အယ်ဒီပါတီမဲများ ပါဝင်ကြောင်း
မြစ်မခသတင်းထောက် အောင်မြင့်မြတ်ချိုက သတင်းပေးပို့သည်။
မော်လမြိုင်တွင် နိုင်ပြီ ဟု အန်အယ်လ်ဒီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်ဆို
ဧပြီ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခု၊ ညနေ ၆ နာရီခွဲ
မော်လမြိုင်တွင် အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဋ္ဌေးကြွယ် နိုင်နေသည်ဟု ထောက်ခံသူများ အားပြောကြားသည်။
လတ်တလော မဲရေတွက်နေသည့် ရလဒ်များ
ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၂ (YPI)
ဓနသိဒ္ဓိ ၁ - NLD ၈၁၅
ဓနသိဒ္ဓိ ၂ - NLD ၇၉၇
သပြေကုန်း ၁ - NLD ၃၅၅
သပြေကုန်း ၂ - NLD ၆၀၈
ရွှေကြာပင် ၁ - NLD ၉၁၈
ရွှေကြာပင် ၂ - NLD ၄၉၉
ဧပြီ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၂ ၊ ညနေ ၄နာရီ ၄၀မိနစ် YPI
မိတ္ထီလာမြို့နယ်၏ ကြိုတင်မဲများအား ရေတွက်လျှက်ရှိရာ ပြည်ပကြိုတင်မဲ ၅၁ မဲ၊ မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပနှင့် ဋ္ဌာနဆိုင်ရာကြိုတင်မဲ ၁၇၉၁ မဲရှိသည်ဟု သိရပြီး မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ် မည်မျှရရှိသည်ကိုမူ မဲရုံကိုယ်စားလှယ် ၄ ဦး ရပ်မိရပ်ဖ ၈ ဦးရှေ့မှောက်တွင်
မော်လမြိုင်တွင် မုရောင်းနှင့် မောင်ငံရပ်ကွက်တို့တွင် ဒီချုပ် အားသာနေကြောင်း မော်လမြိုင်မှ သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ကော့မှူးမြို့နယ်၌ ၉ ရုံတွင် ဒီချုပ်အနိုင်ရရှိမှုမှာ ၈၁. ၆၈ မှ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းထိ ခန့် နိုင်မည် ခန့်မှန်းထားကြောင်း ဒီချုပ် အောင်နိုင်ရေး ကိုယ်စားလှယ်များကပြောသည်။ နောက်ထပ် ၆ ရွာရေတွက်လျှက်ရှိရာ ပြည်တော်သာ ရပ်ကွက် (ဖယောင်းသုတ်ခံရသည့် ရပ်ကွက်) တွင် ၈၈.၇၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်နိုင်ပြီး အခြားမဲရုံ ၅ ရုံတွင်လည်း အနည်းဆုံး ၆၈ရာခိုင်နှုန်းရရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းကြောင်း ၎င်းတို့ကပြောသည်။
ပခုက္ကူ အမှတ် ၅ ရပ်ကွက် မဲရုံ ၁ တွင် ဒီချုပ် ၄၈၇ မဲ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ၄၂ မဲ၊ရရှိထားသည်ဟု သိရှိရသည်။
လတ်တလော မဲရေတွက်မှု ရလဒ်များ
ဧပြီ ၁ ရက်၊ ညနေ ၅နာရီ ၉မိနစ်
ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် ယခုအချိန်ထိ ရေတွက်ရရှိသည့် ရလဒ်များကို ထောက်ချင့်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ရန် သေချာသွားပြီဟု ဒီချုပ်မှ ခန့်မှန်းထားသည်။
မိတ္ထီလာမြို့နယ် ဆိုင်းတန်းရပ်ကွက် ဒီချုပ် ၂၇၇၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ၃၂၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး ၄၊
မိတ္ထီလာမြို့နယ် နန်းတော်ကုန်း ရပ်ကွက် ဒီချုပ် ၃၆၅ ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ၈၈၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး ၂၁၊ ဦးဝင်းဇော် ၇ မဲ တို့ဖြစ်သည်။
မန္တလေး၊ မဟာအောင်မြေ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ် ဦးအုန်းကြိုင် မဲ ၅၀၀ ၊ ၆၀၀ ရသည့်အချိန်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေးမှ ၅၀၊ ၆၀ သာရရှိသည်ဟု လတ်တလော ရေတွက်မှုများအရ သိရသည်။ ပြင်ဦးလွင်တွင်လည်း ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်သီဟက အလားတူ ၁၀ ဆ၀န်းကျင် အသာရနေသည်ဟု သိရသည်။
NLD ၁၈၄ မဲ
USDP ၆၁ မဲ
NLD ၄၃၄ မဲ
USDP ၂၇ မဲ
NLD ၂၀၈ မဲ
USDP ၃၂ မဲ
ကော့မှူးမြို့နယ် သမင်ခြံကျးရွာတွင် NLD - ၄၀၉၊ USDP - ၄၂၁ မဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ - ၅၊ ပယ်မဲ - ၁၅
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ရေတွင်းကုန်းမဲရုံ NLD - ၈၂၂၊ USDP - ၄၀၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) - ၁၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် - ၇၊ မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ - ၆
ကော့မှူးမြို့နယ် ၀ါးင်္သခကျေးရွာတွင် NLD - ၇၉၄၊ USDP - ၁၉ မဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ - ၄၊ ပယ်မဲ - ၁၂
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် သိမ်ဖြူမီးရထား(၁)မဲရုံတွင် NLD - ၁၉၃၊ USDP - ၂၃၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) - ၅၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် - ၁
Right Bean အထူးသတင်း----------
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တံတားဦးမြိုနယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ(၅၀)တွင် NLDမှ အပြတ်သတ် အနိုင်ရရှိပြီး (၄)ရွာတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်၊ မဲစာရင်းများကို ဆက်လက်ရေတွက်နေသည် ဟု တံတားဦးမြိုနယ် NLD အောင်နိင်ရေးကော်မတီမှ ကြားသိရခဲ့သည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ဖဆပလ ရပ်ကွက် မဲရုံ အမှတ်(၁)တွင် NLD ပါတီမှ ၉၄၃မဲ၊ USDP ပါတီမှ ၁၈၁မဲ၊ DPNI ပါတီမှ ၃၁မဲ၊ ဦးကောင်မြတ်ထွဋ် မှ ၂မဲ၊ ဦးဖုန်းမြင့်မှ ၆မဲ၊ ရရှိပြီး မဲရုံအမှတ်(၂)တွင် NLD ပါတီ မှ ၁၀၂၈မဲ၊ USDP ပါတီ မှ ၁၀၆မဲ၊DPNI ပါတီမှ ၃၂မဲ၊ ဦးကောင်းမြတ်ထွဋ်မှ ၇မဲ၊ ဦးဖုန်းမြင့်မှ ၇မဲ ရရှိပြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ကန်တော်လေး အနောက် မဲရုံအမှတ်(၁)တွင် NLD ပါတီမှ ၇၄၆မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီမှ ၇၀မဲ ရရှိလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကန်တောင်ရပ်ကွက်တွင် NLD - ၁၁၈၅၊ USDP - ၁၄၆၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) - ၁၈၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် - ၄၊ မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ - ၂
NLD ပါတီမဲအများစု ရရှိသည့်အတွက် လူအများပျော်မြူးနေကြစဉ် (4 photos)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အမှတ်(၇) ရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံ အမှတ်(၁)တွင် NLD ပါတီမှ၆၈၇ မဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ၁၄၃မဲ၊ မဲရုံ(၂)တွင် NLD ပါတီမှ ၄၇၉မဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ၆၉မဲ မဲရုံ(၃) NLD မှ ၂၃၇မဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ၁၄၁မဲ၊ မဲရုံ(၄) တွင် NLD မှ ၉၀၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၀၂၄မဲ ရရှိနေကြောင်းသိရသည်။ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံ(၅)တွင် NLD ပါတီမှ ၇၈၄မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ၁၁၈မဲ၊ မဲရုံ(၁၀)တွင် NLD ပါတီမှ ၅၇၇မဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ၁၆၆မဲ၊ မဲရုံ(၁)တွင် NLD ပါတီမှ ၆၈၆မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ၁၂၁မဲ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးခင်လှိုင်မှ ၇မဲ၊ NDFမှ ၆မဲ၊ ဦးရဲမင်းသိမ်းမှ ၃မဲ ရရှိပြီး စုစုပေါင်းပယ်မဲ ၅၃မဲ အနက် NLD ပါတီမှ ပယ်မဲ ၃၅မဲ ရှိကြောင်းသိရသည်။
မြောင်းမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မြို့ပေါ်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုမဲရေတွက်မှုအခြေအနေများကို ညနေ ၆း၃၀ နာရီအချိန်တွင် သိရှိရသည်မှာ မြို့ပေါ်မဲရေတွက်မှုကို မသိရှိရသေးသော်လည်း ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၁၁၄ ခုအနက် မဲရေတွက်ပြီးသည့် ကျေးရွာအုပ်စု ၃၀ တွင် NLD ကအနိုင်ရရှိထားပြီး ၄၊ ၅ ခုလောက်တွင်သာ ရှုံးနိမ့်ကြောင်း မြောင်းမြမြို့ NLD အောင်နိုင်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တစ်ခုကပြောသည်။
ပုပ္ဗသီရိမြို့နယ်တွင် မဲရုံစုစုပေါင်း ၈၂ ရုံရှိပြီး မဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိသူစုစုပေါင်း ငါးသောင်းလေးထောင်ရှိကာ လက်ရှိမဲရေတွက်မှုအရ NLD က ၉ ၉ ၉ ၈ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ၇၅၆၈ မဲ ရရှိနေသည်။
Update : 6:28 ကာ့မှူးမြို့နယ်တွင် မဲရုံပေါင်း တစ်ရာကျော်ရှိသည့်အနက် မဲရုံ၈၀ကျော်တွင်မဲရေတွက်ပြီးရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တစ်နေရာတွင်သာ ၁၂မဲဖြင့် ကပ်ရှုံးပြီး ကျန်နေရာအားလုံးတွင် မဲအပြတ်အသတ်နှင့် အနိုင်ရသွားပြီဖြစ်ကြောင်း7Day News သတင်းထောက်ကသတင်းပေးပို့သည်။ သမင်ခြံရွာတွင် ၁၂မဲဖြင့်ကပ်ကာရှုံးခြင်းဖြစ်သည်။ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က စာရင်းများကို ကြေငြာခြင်းမရှိသေးသော်လည်း ကော့မှူးမြို့တွင် NLD ပါတီကိုထောက်ခံသူများအောင်ပွဲခံလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းပေးပို့သည်။
နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်တွင် မဲရုံစုစုပေါင်း ၃၆ ရုံရှိသည့်အနက် ၁၇ ရုံကို ရေတွက်ရာ NLD က ၁၆ ရုံတွင်အနိုင်ရ။
မိတ္ထီလာ တွင် မဲရုံ9ရုံ ရေ တွက် ပြီး ချိန်တွင် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦး ၀င်းထိန် မှာ 5000 ကျော် အနိုင် ရ နေပြီး USDP မှ 1600 ၊ ဒေါ် မြင့်မြင့်အေး 60 ၊ ဦးဝင်းဇော် 12 တို့အသီးသီးရရှိနေကြောင်း NLD ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှ သိရှိရသည်
ကျွန်းစုမြို့ နယ်တွင် မဲရုံ 142 ရုံ ရှိ ရာ မဲရုံ 50 ကျော် ရေတွက်အပြီး တွင် သုံးရုံသာရှုံးသေးကြောင်း
NLD ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှ သိရှိရသည်
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ကုလားကုန်းရွာတွင် ၁၄၉၊ မင်းတဲကုန်းတွင် ၁၆၂၊ ရွာသာကြီးတွင် ၅၇၆၊ ပုတီးကုန်းတွင် ၂၃၄၊ ထန်းတောတွင် ၂၀၄၊ ကျွဲခြံတွင် ၃၇၈၊ နဘဲကုန်းတွင် ၁၆၆၊ ဥယျာဉ်ကျစ်တွင် ၆၁၉၊ ရွှေဘိုရွာသစ်တွင် ၃၄၉ ၊ညောင်ပင်ရွာတွင် ၄၀၀၊ မင်းရွာတွင် ၃၅၉၊ သစ်ချိုကုန်းတွင် ၉၄၊ ရွာသစ်တွင် ၂၃၇၊ ရွာသစ်ကုန်းတွင် ၃၆၁၊ ကျောင်းကုန်းကြီး (၁) တွင် ၃၄၅၊ ကျောင်းကုန်းကြီး (၂)တွင် ၆၀၉၊ ကျောင်းကုန်းကြီး(၃)တွင် ၇၆၁ မဲတို့ဖြင့် NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ရာမှာ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်မှာ ဒေါ်စန္ဒာမင်း၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်မှာ ဦးဖြိုးဇေယျာသော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့မှာ ဦးနိုင်ငံလင်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်မှာ ဦးမင်းသူတို့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဧရာဝတီက နောက်ဆုံးရတဲ့ သတင်းများအရ ဦးနိုင်ငံလင်းက မဲရုံ ၁၇ တွင် မဲရေတွက်ရာမှာ ၁၆ ရုံမှာ အနိုင်ရရှိနေပြီး၊ ဦးဖြိူးဇေယျာသော်လည်း အနိုင်ရရှိသွားတယ်လို့ နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ သတင်းထောက်တွေက ပြောပါတယ်။
အလားတူ ဒေါ်စန္ဒာမင်းနှင့် ဦးမင်းသူတို့ နှစ်နေရာမှာလည်း မဲအကြိတ်အနယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
ဦးခင်ညွန့် nld ကိုမဲပေးသွားတယ်။ လို့နောက်ဆုံးသတင်းအရကြားသိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ပုလဲ မဲဆန္ဒနယ်၌ NLD နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဝင်များ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွား
ပုလဲ၊ ဧပြီ ၁ (6: 05 PM )
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ပုလဲမြို့ နယ်ရှိ ညောင်တုန်း ကျေးရွာတွင် NLD နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဝင်များ ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဝင် တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ နေရာသို့ သွားရောက် သတင်း ရယူနေသော The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ယမန် ( မတ်လ ၃၁ ) ရက်နေ့ညက ပုလဲမြို့ နယ် ညောင်တုန်းကျေးရွာရှိ ဗီဒီယို ရုံတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း လုပ်ကြံ ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုအား ပြသခဲ့ရာ NLD ပါတီဝင် လူငယ်များက သွားရောက် မပြသရန် တားမြစ်ခဲ့ရာမှ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး NLD ပါတီဝင် လူငယ်တစ်ဦး ဦးခေါင်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဝင် လူငယ်တစ်ဦးမှာ ဓါးထိုးခံရ၍ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က ထပ်မံသတင်းပေးပို့သည်။
မန္တလေး မဟာအောင်မြေ၌ NLD အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိဟုဆို
မန္တလေး၊ ဧပြီ ၁ (6: 26 )
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ်များတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အများဆုံး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သည့် မဟာအောင်မြေမြို့ နယ် မဲရုံပေါင်း ၇၉ ရုံတွင် မဲရုံ ၇၀ ၏ မဲများကိုရေတွက်ပြီးစီးခဲ့ပြီ ဖြစ်ရာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီမှ မဲအပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ နေရာ၌ သွားရောက် သတင်းရယူနေသူ The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ကော့မှူး NLD ရုံးချုပ်သို့ ရွှေည၀ါဆရာတော် ကြွရောက်
ကော့မှူး၊ ဧပြီ ၁ (5: 30 PM )
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့မှူးမြို့နယ် NLD ရုံးသို့ ရွှေညဝါဆရာတော် ကြွရောက်လာကြောင်း ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် ရောက်ရှိနေသော The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
အပုပ်နံ့တွေ လှိုင်လှိုင်ထွက်ပါလို့ ..
by Myit Kyoe Inn on Sunday, April 1, 2012 at 1:47am ·
မန္တလေးပြည်တော်သာရပ်ကွက်မဲရုံအမှတ်(၁) ရှိ မဲစာရင်းစာရွက်တွင်ဆန္ဒမဲပေးသည့် စာရွက်ကို ခြစ်မရသဖြင့်
အာဆီယံ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နေ့ရက်။ ။ ၁. ၄.၂၀၁၂
နေရာ ။ ။မြောင်းမြမြို့နယ် ၊ ထူချောင်းကျေးရွာ
မဲရုံထဲတွင် မဲဆန္ဒပေးရန် လာသူများသူများကို မဲရုံမှုးက ခြင်္သေံ့ အားမဲပေးရန် မဲရုံထဲတွင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားစွာဖြင့် ပြောဆို၍မဲပေးခိုင်းနေသောကြောင့် NLDပါတီကိုယ်စားလှယ်မှ(၂)ကြိမ်သတိပေးသော်လည်းမရ၍ရဲစခန်းတွင် ၄င်းမဲရုံမှုးအားအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားကြောင်းသိရှိရသည်။
ပွင့်ဖြူမြို့ နယ် ထနောင်းကုန်းရွာ ရှိ မဲရုံ (2) နှင့် နှစ်အိမ်ကျော်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေးမိသားစုဝင်များမှ ကြံ့ခိုင်ရေးအားမဲပေးရန် မဲဆွယ်နေသည့်ကိစ္စကို မဲရုံမှူးအားတိုင်ကြားသော်လည်း အရေးယူမဖြေရှင်းပေးပဲ ကော်မရှင်သို့ တိုင်ကြားရန်သာ
ပြောကြားခဲ့ကြောင်း NLD ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှ ပြောကြားသည် ။
နေ့ရက်။ ။ ၁ . ၄ .၂၀၁၂
နေရာ ။ ။မြောင်းမြမြို့နယ် ၊ အမှတ် (၁)ရပ်ကွက် ၊ မဲရုံ အမှတ် (၁)
မျက်မမြင်အမျိုးသမီး တစ်ဦး သူ၏သားနှင့်အတူ မဲရုံကိုမဲသွား ပေး စဉ် ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး မှခေါ်သွားခဲ့ပြီး ၄င်းအမျိုးသမီးကNLD မဲထည့်ပေးမည်ဟုပြောဆိုခဲ့ပြီးတကယ်တန်းမဲထည့်သောအခါမမြင်ရ သဖြင့်ခြစ်ရမည့်အကွက်ကို လက်ဖြင့်စမ်းရာ မှားနေသဖြင့်သူ၏သားက “အမေ မှားနေပြီ” ဟု ပြောသည်ကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ်မှမပြောရန် တာမြစ်ခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ကန်တော်လေး ကန်နောက် ရပ်ကွက် ၈၉ လမ်း ရှိ မဲရုံအမှတ် (၂) တွင် လူ တစ်ဦးတည်းမှ မဲသုံးခါပေး သူကို
အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။ယင်းမဲ ၃ ခါပေးသူကို NLD စောင့်ကြည့် သူက
တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို မဲထည့်ခဲ့သည် ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။
နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ၀က်လူးကျေးရွာ မဲရုံ သုံရုံရှိ၊ အရှေ့ခြမ်းမဲရုံမဲစာရွက်အချို့တွင် ဖယောင်းများသုတ်ထားသဖြင့် မဲပေးနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် မဲစာရွက်အသစ်ထပ်တောင်း၍ မရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မှတ်ပုံနံပတ်လွဲမှားမှုများ၊ အဘအမည် လွဲမှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရသည်။ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၆၉၉ ဦး ရှိသည်။
မော်လမြိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်သို့ မဲစာရင်းတွင် မပါဝင်သော အခြားဒေသများမှ ရာနှင့်ချီသော ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဝင်များစုရုံး ရောက်ရှိလာပြီး မဲပေးခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုရာ မဲရုံမှူးက ခွင့်မပြု၍ မဲရုံ ဝန်းကျင်တွင် စုဝေးနေကြကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် မဲရုံ (၅) ၌ ထုတ်ပေးသည့် မဲစာရွက်တွင် NLD ပါတီဘေးရှိ ဆန္ဒပြုရန် နေရာ၌ ဖယောင်းများ သုတ်ထားသဖြင့် အမှန်ခြစ်၍ မရသောကြောင့် မဲစာရွက်အသစ် တောင်းဆိုလဲလှယ် ခဲ့ရကြောင်း ကာယကံရှင်
ကိုကျော်စွာဝင်းက The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မျက်မြင်သက်သေ
၃ ဦးကို ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့မှ ဒေါ်မေချိုဝင်းက ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်ဒေသကြီး၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ ပန်းရွာကျေးရွာ၊ ကုန်းပေါ်ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သူ မမိမာ(မှတ်ပုံတင်အမှတ်- ၅/
ပလန(နိုင်)၁၀၄၈၉၆)ကိုင်ဆောင်ထားသော မဲနံပါတ်(၇၁)အား တစ်ရွာထဲနေသူ ဦးပြည်အေးဆိုသူကလုယူပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအား မဲပေးသွားသဖြင့် ရပ်/ကျေးကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားရန်သွားရောက်ခဲ့ရာတွင် ကော်မရှင်မှတာဝန်ရှိသူများက မမိမာအားဝင်ရောက်ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
နေ့ရက်။ ။ ၁ . ၄ . ၂၀၁၂
နေရာ ။ ။ နေပြည်တော် ၊ ညောင်လူးကျေးရွာ ၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် မဲရုံ
နေပြည်တော် ၊ ညောင်လူးကျေးရွာ ၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် မဲရုံ တွင် မဲလက်မှတ်များတွင် NLD နေရာတွင် ဖယောင်းခြစ်ထားသဖြင့် ဘောပင်ဖြင့် အမှန်ခြစ် ခြစ်ရာတွင် မထင်မရှား ဖြစ်သွားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ထိုသို့မထင်မရှား ဖြစ်သွားသဖြင့် ပယ်မဲများဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် အင်တောရွာတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက မဲဆွယ် သီချင်းများကို အသံချဲ့စက်များနှင့်
ဖွင့်နေ ကြောင်း သိရသည်။ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့တွင် မည်သည့်ပါတီမှ
ပါတီသီချင်းဖွင့်ခြင်း၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်းများ ပြုလုပ်ခွင့် မရှိဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်
၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ သတင်း များ ( ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ၉း၃၀ အထိ နောက်ဆုံးရ သတင်းများ)
ဧပြီ ၁ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် မနက် ၈း၄၅ နာရီ နေပြည်တော်ခရိုင် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှာ သပြေတန်း၊ သပြေကုန်း၊ ညောင်ရိုး စသည့် မဲရုံတွေရှိ မဲပြားတွေကို မှင်ခြစ်ထားသည့်အတွက် ပယ်မဲဖြစ်မည်စိုးသည့် မဲဆန္ဒရှင်များမှ မဲပြား ပြန်လဲပေးရန် မဲရုံမှူးအား တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း မလဲပေးနိုင်ကြောင်း
ပခုက္ကူမြို့ အမှတ် (၃)ရက်ကွက် သီရိရတနာလမ်းမှ ဒေါ်အေးမြင့် မိသားစု (၈)ယောက်၊ ဒေါ်လှသန်းမိသားစု (၆)ယောက်၊ ဒေါ်ဖွားနုမိသားစု (၂)ယောက် မဲပေးခွင့်စာရင်းတွင် မပါဝင်သည့်အတွက်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသို့ အချိန်မှီ
တင်ပြပြီးမဲပေးခွင့်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်၇ာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့တွင် မဲပေးခွင့်ရရှိရေး
ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ချွေးသိပ့်နှစ်သိမ့်ထားပြီး ၊ယနေ့မနက်မဲသွားပေးရာတွင် မဲပေးခွင့်မရ ရပ်ကွက် ဥက္ကဌမှ
အဆိုပါလူများအား အတွေ့မခံ ရှောင်နေကြောင်း ဒေါ်နွေနွေလှိုင်မှ သတင်းပေးပို့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၆၈ ရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံတခုအတွင်းသို့ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များ မဟုတ်သူ ကြံခိုင်ရေးပါတီမှ ကျော်ကျော်ဦးနှင့် မြတ်သူတို့ အဆီးအတားမရှိ ဝင်ထွက်သွားလာနေကြောင်း
အန်အယ်လ်ဒီ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များက ရန်ကုန်တိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှ တဆင့်
ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်တော်သာ ရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံ၌ မဲဆန္ဒရှင် ဒေါ်တင်တင်အေး၏ မဲလက်မှတ်လက်တွင် အမှန်ခြစ်ရမည့်
နေရာ၌ ဖယောင်းသုတ်ထားပုံစံ ဖြစ်နေပြီး မင်ချော် ခဲ့ခြင်းကြောင့် မဲစာရင်း လက်မှတ်အား ပြန်လဲပေးရန် တောင်းဆိုမှု ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း မဲရုံ တာဝန်ရှိသူများမှ လဲ မပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် မဲလက်မှတ်မှာ တစ်ဦးလျှင် တစ်စောင်သာ
ထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
- မဲဆန္ဒပေါ်မှာ အမှန်ခြစ် ခြစ်လို့မရတဲ့ မဲစာရွက်များကို မဲရုံတွေက စာရွက်အသစ် မလဲပေးကြောင်းသိရ။
- ကြိုတင်မဲပေးသောအခါ မဲစာရွက်ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအကွက်မှာ ဖယောင်းသုတ်ထားတာ တွေ့ရတယ်။
- ကြိုတင်မဲစာရင်းကို မတ်လ ၃၁ နေ့ ညနေ ၆ နာရီမှာ နောက်ဆုံးပေးရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှ ကြိုတင်မဲစာရင်းများ ရရှိဟု မြို့နယ် NLD ကပြောသည်။
- အချို့ကျေးရွာများတွင်မဲပေးရာနေရာ၌ ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှုးများက စောင့်ကြည့်နေမှုများကြောင့် မဲပေးသူများသည် လွတ်လပ်စွာမဲပေးခွင့်ပုံစံမရရှိဟု ခံစားရ။
- ပုံစံ၁၇နဲ့ ၁၈ စာရွက်များကို ရပ်ကျေးကော်မရှင်က လက်မှတ်မထိုးပေးတဲ့ ကိစ္စများဖြစ်။
အဆိုပါ ဖြစ်ပွားရာ ရွာများသည် ညောင်ကိုင်းကျေးရွာ၊ ကန်ကျေးရွာ၊ ကျောက်အိုးကျေးရွာ၊ ဝါးရဲကျေးရွာ၊ ဆည်ချောင်းကျေးရွာ၊ ယားကျေးရွာ၊ ကျောက်မှော်ကျေးရွာ၊ ကူလဲကျေးရွာ၊ ပိက္ခယားကျေးရွာ၊ ပသေးကျေးရွာ၊ ကြာပင်ကျေးရွာ၊ ကျော်ရွာ၊ တို့ဖြစ်သည်။
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြဿနာအချို့၁။ ကန်တော်လေး အနောက်ရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံအမှတ် ၂ တွင် လူတစ်ဦးက ၃ ကြိမ် မဲထည့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂။ ဖဆပလ ရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံအမှတ် ၃ တွင် ကြိုတင် မဲစာရင်းများအား ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ နံနက်၁၀နာရီခန့်အထိ ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
၃။... သာယာကုန်း ရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံအမှတ် ၄ တွင် မဲပေးကြသူများအား စာရင်းတွင် လက်မှတ် ရေးထိုးခိုင်းခြင်းမရှိဘဲ
၄။ ကျီတော်ရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံအမှတ် ၁ တွင် မဲပေးရမည့် နေရာတွင် ဖယောင်း သုတ်ထားခြင်းကြောင့် အမှန်ခြစ်၍ မရခဲ့ကြောင်း မဲပေးခဲ့သူအချို့မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
၅။ မလွှကုန်းရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံအမှတ် ၂၊ ၃ တွင် ယခင် ထုတ်ပေးခဲ့သည့် မဲစာရင်းနှင့် အတည်ပြုမဲစာရင်းမှာ
ပုလဲမြို့ သင်နှီးခံရွာတွင်မဲရုံ မှုးဆိုသူ ကိုယ်တိုင်းလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်ဖြစ်သူ ဆရာမဒေါ်တင်မာဝင်းမှ မဲလာပေးသူ မသန်းမြ၏မဲပြားပေါ်တွင် ကိုယ်တိုင် ကြံ့ခိုင်ရေးအကွက်တွင် အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ကြောင်း NLD ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှ သိရှိရသည်။
နေပြည်တော်ခရိုင် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ကျည်တောင်ကန် ရပ်ကွက် မဲရုံ အမှတ် (၃) တွင် မဲရုံစောင့် ကျောင်းဆရာမများ မှ မဲရုံအတွင်း မဲလာပေးသည့် မဲဆန္ဒရှင်များအား ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုသာ မဲပေးရန် မဲဆွယ်စည်းရုံးနေသည်ဟု ဘားမားဗီဂျေမီဒီယာကို ပြောပါသည်။
Ref:Burma VJ Media Network
ကလောမြို့ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင် တစ်ချို့ကသူတို့ပါတီကို မဲပေးဖို့ မဲတစ်ပြား
ကျပ် ၃၀၀၀ နှုန်းနဲ့ ၀ယ်နေကြောင်း မြို့ခံတွေကပြောပြပါတယ်။ဒီလို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေမှုကို အင်န်အယ်လ်ဒီ
အပြင်စည်းစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကလည်း တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်ကာ ကော်မရှင်ကို
Ref:Yangon Press International
နေပြည်တော်၊ ဇဗ္ဗူသီရိ မဲဆန္ဒနယ်မြေ၊ ရွှေကြာပင်ရပ်ကွက် မဲရုံတွင် လက်ရှိ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်သူ ဦးတင့်ဆန်း၏ ACE ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက မဲလာပေးသူများ
ကို ထမင်းတစ်ထုပ်နှင့် ငွေကျပ်တစ်ထောင်စီ ဝေငှနေသည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း
The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ဖျာပုံရပ်ကွက် ၁၆ ရပ်ကွက် မဲရုံအမှတ် (၃) (၄)တွင့် ရှိတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် ၁၀၀ ခန့် မဲစာရင်းမပါရှိပဲဖြစ်နေကြောင်း။ ပထမထုတ်ပြန်ထားသည့် စာရင်းတွင် မပါရှိ၍ သွားပြောထားခဲ့သည့် လူအချို့လဲ အခု ပြန်ပါမလာကြောင်း။ ခွပ်ဒေါင်းအတွက် ဆန္ဒပြုလုပ်ရမည့်နေရာတွင် ဖယောင်းသုတ်ထားသည်ဟု မဲပေးခွင့်ရခဲ့သူ ဒေသခံအချို့ကပြောသည်။ ခရီးသွားရမည့်သူ၊ ပိုက်ချသွားမည့်သူအချို့သည် ကြိုတင်မဲထည့်ရန် ကြိုးစားသည့်အခါ ထည့်ခွင့်မရသည့်သူများ ရှိသည်ဟု သိရသည်။
မဲရုံဖွင့်လှစ်သည့် မနက် ၆ နာရီမှာ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအတွင်း မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် မြို့နယ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်များအနက် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်သည် မဲစာရင်း မှားယွင်းမှု အများဆုံး ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပြီ မဲမပေးရ၍ မကျေနပ်မှုအများဆုံး ဖြစ်ပွားနေသည့် မဲဆန္ဒနယ် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တွင်ရှိသည့် မဲပေးခွင့်အတွက် ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ထားသည့်စာရင်းတွင် ပါရှိသော်လည်း ယနေ့လာရောက်ပေးသည့်အခါ နာမည်မပါဝင်၍ မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြကြောင်း ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မဲဆန္ဒရှင်များထံမှ သိရှိရသည်။ မှတ်ပုံတင်တွင် နံပါတ်မပီသသည့်အတွက် အိမ်ပြန်၍ သန်းခေါင်းစာရင်းပြန်ယူခိုင်းသဖြင့် အိမ်ပြန်ရသူများရှိနေကြောင်းလည်းသိရှိရသည်။ သန်းခေါင်စာရင်းတစ်ခုထဲပါဝင်သော မိသားစုတစ်စုထဲ၌ပင် မဲစာရင်းတွင် မပါဝင်သဖြင့် မဲမပေးရသူများရှိကြောင်း။ ကိုယ်အင်္ဂါကောင်းကောင်းမလှုပ်ရှားနိုင်သော်လည်း ကြိုတင်မဲပေးလိုက်ပါက မသမာမှုများ ပြုလုပ်မည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ကိုယ်တိုင်လာပေးသည့် ကိုယ်အင်္ဂါကောင်းကောင်းမလှုပ်ရှားနိုင်သူများ များပြားနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။
မန္တလေးမြို့ ၄၁ လမ်း သံလျက်မှော် အရှေ့ရှိ မဲရုံအမှတ် ၇ တွင် မဲပေးရန်အတွက် မင်နီဘောလ်ပင်တချို့ကို ထုတ်ပေးထားရာ နံနက်ပိုင်းတွင် လာရောက်မဲထည့်သော ပြည်သူများက မင်နီနှင့် မဲပေးသွားကြကြောင်း၊ မင်နီဘောလ်ပင်ဖြစ်နေ၍ အကြောင်းကြား သည့်အခါမှ မင်အနက်နှင့် အပြာရောင် ဘောလ်ပင်များကို ပြန်လဲလှယ်ပေးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက
မန္တလေး NLD လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအုန်းကြိုင် သို့ ပြောကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြေမြို့နယ်တွင်ကြံ့ဖွတ် ခင်မောင်ထွန်းဆိုသူသည်ကြံ့ဖွတ်အတွက်မဲပေးရန် လူလေးရာကျော်ကိုကမဟာအောင်မြေမြို့နယ်အတွင်း တရားမဝင်အိမ်ထောင်ပြောင်း၍မဲရယူထားပါသည် အမှန်အကန်သတင်းဖြစ်ပါသည်
တောင်ငူမြို့နယ် ၂ ရပ်ကွက်နေထိုင်သူ ၄၅၀ကျော်သည် မဲပေးရာတွင်ပါဝင်ခွင့်မရသည့်အတွ
က် အဆိုပါမဲပေးခွင့်မရသူများအနက်မှ လူဦးရေ ၁၀၀ ကျော်ခန့်သည် မဲရုံအနီးတွင် စုဝေးလျက်ရှိခြင်းကြောင့်
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပွားရာနေရာသို့မြို့နယ်ကော်မရှင်ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိကာ ရပ်ကွက်ရုံးတွင် ယနေ့ ၁၁ နာရီကျော်မှစတင်ကာနာရီဝက်ခန့်...အကြာ ရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
''ဒီနေ့ ဒီရက်မှာ ဒီလိုအမှားမျိုး တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှား ပမာဏကြီးမားတော့ ဒီလိုအခြေ အနေမျိုးတွေ မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့။ ရပ်ကွက်အောက်ခြေမှာ အား နည်းချက်တွေ ရှိနေတယ်။ အောက် ခြေက ကော်မရှင်ရော၊ ရာအိမ်မှူးတွေရော
အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက်ဒီလို ပြဿနာမျိုးတွေ ကြုံရ တာ။ ရပ်ကွက်မှာ ကင်းကြေးတွေ ကောက်တယ်။
ဒါမျိုးကျတော့ လူ မကျန်အောင် အိမ်တိုင်း ကောက် နိုင်တယ်။ အခု နိုင်ငံတော်အဆင့် အရေးကြီးတဲ့ ဒီကိစ္စတွေကို သူတို့ လေးလေးစားစား မလုပ်တာကို ကော်မရှင်ကို တင်ပြတယ်''
ဟုတောင်ငူမဲဆန္ဒနယ်မှ ၀င် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်စိုးမြင့်က မီဒီယာများ နှင့် တွေ့ဆုံပြောကြားသည်။ အဆိုပါရပ်ကွက်တွင် မဲပေးခွင့်ရှိသူဦးရေမှာ ၈၅၆၂ ဦးရှိသည်။
ပဲခူးတိုင်း၊က၀ကျေးရွာမှာ ငှက်ကြီး၊ ရေကျော် ၊ ကျူံတော ကျေးရွာပိုင်းတွင် ဒေသခံရွာသား ဦးသန်းလှိုင်မှ မဲတစ်ရွက်လျှင် ငွေကျပ် ၅၀၀နှုန်းဖြင့့်် လိုက်လံဝယ်ယူနေကြောင်း၊ ၄င်းဝယ်ယူထားသူများက မဲဆန္ဒရှင် ၃၀ဦးခန့်ကို NLD ပါတီမှ သိရှိဖမ်းမိကြောင်း၊ သက်သေရှိကြောင်း NLD ပါတီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာ စိုးမြင့်သန်း (စာရေးဆရာအောင်ထိပ်) က မြစ်မခ သတင်းထောက် ဥာဏ်ဥာဏ်ကို ပြောသည်။
မြစ်မခသတင်းထောက် ဥာဏ်ဥာဏ်မှ သတင်းပေးပို့သည်။